Ukuboniswa kolungelelwaniso-Chengdu Ruibo Technology Co, Ltd.
ISIZATHU SOKUBA IKHAMERA IFUNE "Ulawulo lonxibelelaniso"
Sonke siyazi ukuba ngexesha lokubhabha, idrone iya kunika umtsalane kwiilensi ezintlanu zekhamera ye-oblique. Iilensi ezintlanu kufanele ukuba zivezwe kulungelelwaniso olupheleleyo, kwaye emva koko urekhode ulwazi olunye lwePOS ngaxeshanye. Kodwa kwinkqubo yokwenyani yokusebenza, safumanisa ukuba emva kokuba idrone ithumele umqondiso wokutsala, iilensi ezintlanu azinakubonakaliswa ngaxeshanye. Kutheni le nto yenzekile?
Emva kwenqwelomoya, siya kufumanisa ukuba umthamo opheleleyo weefoto eziqokelelwe ziilensi ezahlukeneyo wahlukile ngokubanzi. Kungenxa yokuba xa usebenzisa i-algorithm efanayo yoxinzelelo, ubunzima beempawu zobume bomhlaba zichaphazela ubungakanani bedatha yeefoto, kwaye iya kuchaphazela ukungqamanisa kwekhamera.
Iimpawu ezahlukeneyo zendlela
Ukuntsonkotha kobume beempawu, kokukhona isixa sedatha esifunwa yikhamera ukusombulula, ukucofa kunye nokubhala., Ixesha elininzi elithathayo ukugqiba la manyathelo. Ukuba ixesha lokugcina lifikelela kwindawo ebalulekileyo, ikhamera ayinakuphendula kwisiginali sexesha ngexesha, kunye nesenzo sokuvezwa kwesenzo.
Ukuba ixesha lokuphumla phakathi kokuvezwa kokubini lifutshane kunexesha elifunekayo lekhamera ukugqibezela umjikelo wefoto, ikhamera iya kuphosa iifoto ezithathiweyo kuba ayinakugqiba ukubonakaliswa ngexesha. Ke ngoko, ekuhambeni komsebenzi, iteknoloji yokulawula ukungqamanisa ikhamera kufuneka isetyenziselwe ukudibanisa ukubonakaliswa kwekhamera.
I-R & D yetekhnoloji yolawulo lokuvumelanisa
Kwangoko safumanisa ukuba emva kwe-AT kwisoftware, impazamo yokuma kweelensi ezintlanu emoyeni ngamanye amaxesha inokuba nkulu kakhulu, kwaye umahluko wesikhundla phakathi kweekhamera unokufikelela kuma-60 ~ 100cm!
Nangona kunjalo, xa sivavanya emhlabeni, safumanisa ukuba ukungqamanisa ikhamera kusephezulu kakhulu, kwaye impendulo ifike ngexesha elifanelekileyo. Abasebenzi be-R & D badidekile, kutheni isimo sengqondo kunye nempazamo yokuma kwesisombululo se-AT sikhulu kangaka?
Ukufumana izizathu, ekuqaleni kophuhliso lwe-DG4pros, songeze isibali-xesha kwikhamera ye-DG4pros ukurekhoda umahluko wexesha phakathi kwesiginali yedrone kunye nokuvezwa kwekhamera. Kwaye kuvavanywa kwezi meko zine zilandelayo.
Umboniso A: Umbala ofanayo kunye nokuthungwa
Isimo C: Umbala ofanayo, imibala eyahlukeneyo
Isimo D: imibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa
Itheyibhile yeziphumo zovavanyo
Kwimiboniso enemibala ecebileyo, ixesha elifunekayo kwikhamera yokwenza ukubala kweBayer kunye nokubhala liza kwanda; Ngelixa lemiboniso enemigca emininzi, ulwazi oluphezulu lwefrikhwensi lukhulu kakhulu, kwaye ixesha elifunekayo kwikhamera yokucinezela liya kwanda.
Kuyabonakala ukuba ukuba isampulu yekhamera isezantsi kwaye ubunjani bulula, impendulo yekhamera ilungile ngexesha; kodwa xa isampulu yekhamera yokuphakama iphezulu kwaye ubume bunzima, umahluko wempendulo yekhamera uya kwanda kakhulu. Kwaye njengokuhamba rhoqo kokufota, ikhamera iya kuthi ekugqibeleni iphoswe iifoto.
Umgaqo wokulawulwa kokudityaniswa kwekhamera
Ukuphendula kwezi ngxaki zingasentla, uRainpoo wongeze inkqubo yolawulo lwenkcazo kwikhamera ukuze kuphuculwe ukungqamaniswa kweelensi ezintlanu.
Inkqubo inokulinganisa umahluko wexesha "T" phakathi kwedrone ithumela umqondiso wokuqalisa kunye nexesha lokuvezwa kwelensi nganye. Ukuba umahluko wexesha "T" weelensi ezintlanu ukuluhlu oluvumelekileyo, sicinga ukuba iilensi ezintlanu zisebenza ngaxeshanye. Ukuba ixabiso elithile lengxelo yeelensi ezintlanu likhulu kunexabiso eliqhelekileyo, iyunithi yolawulo iya kugqiba ukuba ikhamera inexesha elikhulu-umahluko, kwaye ekuvezeni okulandelayo, ilensi iya kuhlawulwa ngokwahluka, kwaye okokugqibela Iilensi ezintlanu ziya kuvezwa ngokulandelelana kwaye umahluko wexesha uyakuhlala ukuluhlu oluqhelekileyo.
Ukusetyenziswa kolawulo lokuvumelanisa kwi-PPK
Emva kokulawula ukungqamanisa kwekhamera, kwiprojekthi yophando kunye nemephu, i-PPK inokusetyenziselwa ukunciphisa inani lamanqaku olawulo. Okwangoku, zintathu iindlela zonxibelelwano zekhamera ye-oblique kunye ne-PPK:
1 Enye yeelensi ezintlanu inxulunyaniswe nePPK
2 Zonke iilensi ezintlanu ziqhagamshelwe kwi-PPK
3 Sebenzisa itekhnoloji yokulawula ukungqamanisa kwekhamera ukondla ixabiso eliqhelekileyo kwi-PPK
Unyulo ngalunye kwezi zintathu lunezinto ezilungileyo nezingalunganga:
1 Uncedo lilula, into engalunganga kukuba i-PPK imele kuphela imeko yendawo yelensi enye. Ukuba iilensi ezintlanu azihambelani, iya kubangela impazamo yokuma kwezinye iilensi ukuba zibe nkulu.
2 Uncedo lukwalula, ukubekwa ngokuchanekileyo kuchasene nengxaki kukuba inokujolisa kwiimodyuli ezithile ezahlukileyo
3 Izibonelelo kukubeka ngokuchanekileyo, ukusebenza ngokuchaseneyo okuphezulu, kunye nenkxaso yeentlobo ezahlukeneyo zeemodyuli ezahlukeneyo. Ukungancedi kukuba ulawulo luyinkimbinkimbi kwaye iindleko ziphezulu kakhulu.
Okwangoku kukho idrone kusetyenziswa ibhodi ye-100HZ RTK / PPK. Ibhodi ixhotyiswe ngekhamera ye-Ortho ukufezekisa i-1: 500 ye-topographic map-point-free-point, kodwa obu buchwephesha abunakufezekisa indawo engenamandla okulawula indawo yokufota. Ngenxa yokuba impazamo yokuvumelanisa yeelensi ezintlanu inkulu kunokuchaneka kokuma umahluko, ke ukuba akukho khamera ine-ungqamaniso oluphezulu, umahluko ohamba rhoqo awunantsingiselo ……
Okwangoku, le ndlela yokulawula kukulawula, kwaye intlawulo iya kwenziwa kuphela emva kokuba impazamo yokuvumelanisa ikhamera inkulu kunomqobo osengqiqweni. Ke ngoko, kwimiboniso enotshintsho olukhulu kulwakhiwo, ngokuqinisekileyo kuya kubakho iimpazamo kumanqaku athile amakhulu kunombundu,. Kwisizukulwana esilandelayo seemveliso zothotho lweRie, iRainpoo iphuhlise indlela entsha yolawulo. Xa kuthelekiswa nendlela yolawulo lwangoku, ukuchaneka kokudityaniswa kwekhamera kunokuphuculwa ubuncinci ngokomyalelo wobungakanani kwaye kufikelelwe kwinqanaba le-ns!